Faka ezi ngcebiso zilandelayo malunga nokonwaba ekhaya ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Faka ezi ngcebiso zilandelayo malunga nokonwaba ekhaya
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 644
Ukuba ubambekile ekhaya kwaye awazi ukuba uzonwabisa njani, kuya kufuneka ufunde esi sithuba. Ewe, ndiza kukufundisa ukonwaba ekhaya Yeyona misebenzi ibangela umdla neyolisayo.
Zininzi iindlela zokuzonwabisa ekhaya, udinga idosi yobuchule kwaye ndiyakuqinisekisa, uya kuchitha ubusuku obuhle. Ukongeza, awudingi ukuchitha imali okanye ukuhamba kunye nokuchitha usuku oluhle ekhaya. Nangona uthanda, ungasoloko ufowunela abanye babahlobo kwaye ulungiselele imidlalo yobumnandi.
Kungekudala, ndiza kwabelana nawe ngezinye iingcinga ezimnandi oya kuthi ngokuqinisekileyo uzithande kwaye akuncede Yilwa nesithukuthezi ekhaya. Ukusuka, iintlanganiso ezimnandi nabahlobo okanye usapho, izinto zokuzonwabisa kunye nokunye okuninzi. Fumana ngoku!
Iindlela ze-15 zokuzonwabisa ekhaya
Abantu abaninzi abazi ukonwaba ekhaya Ngexesha loloyolo, ke, badla ngokuziva bexinekile kwaye bekhathazekile. Ukuba uziva njalo, kuya kufuneka uyazi ukuba, ukuchitha ubusuku obumnandi ekhaya kunokwenzeka ngentlangano encinci kunye nokudala.
Zininzi iindlela zokwenza wonwabe ngexesha leempelaveki apho ungayi ndawo. Ndiyakuqinisekisa, uya kuchitha usuku ngaphandle kokuqhelekileyo, lowo, uya kufuna ukuphindaphinda kwakhona.
Okulandelayo, ndiza kuphakamisa izimvo ezintle ukusuka ukonwaba ekhaya. Ke, ungonwaba kakhulu wedwa, okanye uhamba nabantu obathandayo. Qaphela!
Lungisa iopoppy, hlala ebhedini kwaye uzonwabise ngebhanyabhanya Ndinokufumana ingqalelo yakho. Ukuba awukwazi ukufumana nantoni na enomdla kumabonwakude, unokuhlala uye kwi-intanethi. Ngethamsanqa, i-intanethi ibamba ingxelo ebanzi ye Iinkqubo zeTV Oko kuya kukukhuthaza.
Le isenokuba inketho yokuphazamisa iiyure kwaye uphumle kancinci. Inokukunceda ubonakalise kwaye ujonge inyani ngokwendlela eyahlukileyo.
I-Intanethi ibamba iwebhusayithi ezininzi apho, uya kufumana imidlalo yevidiyo emininzi onokuthi udlale kwisixhobo sakho esiphathwayo okanye i-pc.
Kuzo zonke iitapile kunye nayo yonke iminyaka, imidlalo yevidiyo yeyona ndlela iyonwabisa yokuchitha ixesha ekhaya. Ukuphepha ukuthamba, uya kukhuthaza ubuchule bakho kwaye uya kusebenzisa amandla akho okujonga, ukwenza izigqibo, ubuchule, ubugqi nokunye okuninzi.
Kuyo yonke imbali umculo ubusoloko u Ubugcisa obunempembelelo ngakumbi ebantwini. Kumculo hlala ezona ngoma ziyonwabisa nezikhuthazayo ezingathandabuziyo ziya kukwenza uziva iimvakalelo ezininzi.
Unokonwabela iintlobo ezininzi ezifana:
I-Elektroniki kunye nokunye okuninzi.
Okukhethiweyo akunamda. Ngokuqinisekileyo a indlela entle yokukuvuyisa ngelixa ucoca, upheka okanye usenza omnye umsebenzi ekhaya.
Cula kwaye udanise
Ukucula nokudanisa kungummangaliso Umsebenzi onxulumene nomculo, eya kuthi, ngaphandle kokuba yonwabisa kakhulu, iya kukunceda ukuba ube nobuchule ngakumbi ekuyileni.
Ezi zenzo zovuyo zikunceda ukuveza iimvakalelo kunye neminqweno, uzive ukhululekile, inkululeko kunye nokuphumla engqondweni.
Ukucula nokudanisa uwedwa ekhaya kuya kukwenza uzive ukhululekile Hambisa njengoko ufuna nokucula ingoma oyithandayo. Nangona kunjalo, ungayenza njengesibini, banokonwaba kakhulu kwaye bomeleze amaqhina othando kunye nokuthembana.
Yinto eyonwabisayo nenobuchule bokuzonwabisa evelisa umphumo owanelisayo. Ewe, ukuba ubhala a inqaku, isincoko, ibali, inoveli, isihobe okanye into ocinga ngayo ikuvumela ukuba uvelise. Ikwayindlela entle yokufunda izinto ezintsha kunye nokukhulisa uhlalutyo lwakho kunye nezakhono zokubhala.
Funda ibali okanye ibali elifutshane elikunika wena ngokukhawuleza. Oku kuyakuvumela yiya kwihlabathi elitsha nelinomtsalane, phila obunye ubomi kwaye ucinge ngamava amnandi avela kwiziqithi zekhaya lakho.
Ukuba awunayo incwadi ekhangeleka ngathi isherifu yakho imnandi kwaye inomdla Ungaya kwiwebhu, kukho amaqonga amaninzi anekhathalogu ebanzi yeencwadi ezikwi-Intanethi zohlobo olukhethayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yindlela entle yokuchitha usuku ekhaya xa uwedwa ngokupheleleyo.
Yindlela entle yokuchitha usuku ukuyila okuhle, ukwakha okanye ukuhombisa nantoni na. Kwakhona, yenza i-collage eneefoto, uyihlobise ngengubo okanye wenze nayiphi na into yokuhombisa.
Ukuba awulunganga kakhulu ngezandla, yeka nje umbono wakho ubhabhe kwaye Zama ukuzoba umfanekiso kwaye ufake umbala. Ngale ndlela, uya kuphuhlisa ubuchule bakho bokuyila, ukwandisa ukuzithemba kunye nokohlula isithukuthezi.
I-YouTube yiwebhusayithi enikezela ngeenkonzo zokubamba ividiyo. Apho, amawaka abasebenzisi babelana yonke imihla Iividiyo ezininzi nakweyiphi na isifundo.
Kule meko, ufuna ukususa isithukuthezi kwaye uhleke de ungasakwazi, ke jonga iividiyo ezihlekisayo kwi-YouTube. Yeyona ndlela ibalaseleyo wonwabe ngokupheleleyo Nokuba uhamba wedwa okanye uhamba kunye.
Imidlalo ihlala ikhethwa ukuba idlalwe ekhaya ngeli xesha lasemini isidinala. Ukongeza, yindlela entle yokwenza tshintsha inkqubo kwaye yomeleze amaqhina Ukuthanda abahlobo kunye nosapho.
Eminye yemidlalo yebhodi onokuyithanda yile:
Kwimarike unamakhulu eendlela ongakhetha kuzo. Ke, kufuneka umeme abanye abahlobo okanye amalungu osapho azimiseleyo ukudlala imidlalo ethile ekhaya.
Yenza kwakhona ikhaya lakho
Ngamanye amaxesha, umbono jika yonke into ejikeleze kuthi. Kwaye leliphi ixesha elingcono xa ugoduka ungenanto yokwenza.
Zama ukuphinda uyilungelelanise ifenitshala, ubeke imihlobiso okanye mhlawumbi udwebe udonga. Isiphelo sinokukumangalisa. Uya kuyifumana loo nto Ukuziva ikratshi, ukwaneliseka kunye neemvakalelo.
Lo msebenzi unokwenziwa ngokukodwa okanye ngokwamaqela apho ungabela khona imisebenzi.
Pheka isidlo esimnandi
Cela umntu ukuba akuncede lungiselela isidlo esimnandi. Ungazama ukwenza iicookies, ikhekhe, ikeyiki yetshokholethi, iisandwich, isiqhamo esimnandi sesiqhamo okanye nayiphi na into oyithandayo oyithandayo.
Ukupheka into emnandi yindlela elungileyo yokuchitha ixesha nomntu omthandayo ngelixa usenza into eyonwabisayo.
Unyango lomdaniso yindlela elungileyo yokonwaba ngelixa uzilolonga nomzimba wakho ngokudanisa kunye zidityaniswe kwaye zilungelelaniswe nentshukumo. Ke, hambisa ifanitshala ethile ekhaya kwaye ubeke ividiyo yonyango lomdaniso. Lo msebenzi uza kukunceda ukuphucula ukuzithemba, impilo kunye nokuqina.
Ukuba ukhetha, unokwenza ezinye iintlobo zokuzilolonga ezifana:
I-bicep curl yasekhaya.
Ndiyakuqinisekisa, uya kuziva ubhetele ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo.
Ziqhelanise ne-yoga okanye ukucamngca
Ngamanye amaxesha sichaphazeleka ngoxinzelelo, ukudinwa kunye nokukhathazeka kwemihla ngemihla. Ke, kuya kulunga kuwe Khulula umzimba nengqondo yakho. Ke, ndincoma ukwenza lo msebenzi umnandi ekhaya. Ewe, wonwabe kwaye uzive ulwaneliseko olunzulu kunye noxolo lwengqondo.
Yazisa lo msebenzi kubomi bakho bemihla ngemihla, phucula ubomi bakhoImeko yakho yemvakalelo, imisebenzi yokuqonda kunye neminye imiba ebalulekileyo.
Ukuba uyawathanda amaqela, yonwabisa amaqela kunye umculo omninzi nomdaniso. Ke kuyakulunga ukuba ulungiselele itheko endlwini yakho. Kufuneka umeme abahlobo bakho kwaye ulungiselele ukutya kunye neziselo.
Yandisa ngokuhlwa kanye njengoko ufuna kwaye dibanisa nabahlobo bakho
Nawuphi na umhla weveki ungalungisa a ubusuku obukhethekileyo nabahlobo bakho. Elona xesha lilungileyo lokuthetha, ukwenza izono, ukuhleka kunye nokuphumla kancinci ukubukela imovie elungileyo.
Ubusuku nabahlobo sisicwangciso esifanelekileyo sakho Phuma kwinkqubo kwaye uqinise olo manyano lomanyano kunye nobuhlobo. Eyona nto ingcono kukuba, awudingi utyalomali oluninzi, okanye amalungiselelo amakhulu.
Okokugqibela, ezi zezezinye izimvo ezilula malunga neendlela ezahlukeneyo ze Uyonwaba njani ekhaya. Unokhetho oluninzi onokonwaba ngalo ngezo ntsuku xa ungenanto yakwenza.
Unoyolo ukuphuma kwesiqhelo! Ndiyakuqinisekisa, uya kuba noqinisekisile ukonwaba, nokuba uwedwa okanye uhamba naye.
1 Iindlela ze-15 zokuzonwabisa ekhaya
1.1 Ithiyetha yasekhaya
1.3 Mamela umculo
1.4 Cula kwaye udanise
1.6 Funda incwadi
1.7 Yenza ubugcisa
1.8 Curiosea kwiYouTube
1.9 Imidlalo yebhodi
1.10 Yenza kwakhona ikhaya lakho
1.11 Pheka isidlo esimnandi
1.12 Yenza umthambo
1.13 Ziqhelanise ne-yoga okanye ukucamngca
1.14 Lungiselela itheko
1.15 Ubusuku bamantombazana
Fumanisa ukhetho olululo ngendlela oza kuwunxiba ngayo umtshato
Funda ezi ngcebiso zilandelayo malunga nokonwaba njengesibini kunye nokuphuma kwinkqubo!